musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Mumwe muvashanu veBrits akazvidza zano pamusoro pekufamba kune dzimwe nyika
Vanhu vazhinji vanobva kuLondon vakazorora kunze kwenyika mumwedzi gumi nemiviri yapfuura kupfuura chero imwe dunhu reUK, 12% vachiti vakatora zororo remhiri kwemakungwa kwemazuva manomwe kana kupfuura uye 41% chete vachiti vanga vasina zororo zvachose.
Mumwe muvanhu vashanu akasiya kushushikana pamusoro peCovid - uye akashora yambiro inodzokororwa kubva kune vezvematongerwo enyika nenyanzvi kuti vagare pamba - kuti vatore zororo remhiri kwemakungwa mugore rapfuura, inoratidza tsvakiridzo yakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Mibairo kubva kuWTM Indasitiri Report, iyo yakabvunzurudza vatengi zviuru zana vekuUK, inoratidza makumi maviri nerimwe muzana evaBrits vakatora zororo remazuva manomwe kana kupfuura mumwedzi gumi nemiviri kusvika Nyamavhuvhu 1,000, paine 21% yeavo vane rwendo rwemhiri kwemakungwa UYE pekugara.
Imwe 29% yakatora pekugara chete, nepo 51% vasina kuenda kuzororo zvachose mugore rapfuura, inoratidza chirevo chakaburitswa kuWTM London.
Avo vakaenda kunze kwenyika kwekuzorora kwemazuva manomwe kana kupfuura vakazviita kunyangwe zvikumbiro zvakadzokororwa kubva kumakurukota eHurumende nevapi vezano vehutano kuti vasafambe, pakati pekutya kuti Covid inogona kupararira.
Panguva dzakasiyana mumwedzi gumi nesere yapfuura, kufamba mukati nekubva kuUK kwakamiswa nekuda kweCovid, kusanganisira mukati memwedzi mitatu yekutanga ya18, apo kufamba mhiri kwemakungwa kwaive kusiri pamutemo.
Nyangwe pakufamba mhiri kwemakungwa aiva zvichitenderwa, makurukota eHurumende nenyanzvi dzezvokurapa vakaramba vachikurudzira vanhu kuti vasiye zororo ravo repagore remhiri kwemakungwa kuitira kubatsira Covid.
Muna Chikumi 2020, aimbova Gurukota rezvehutano, Helen Whately akaudza Brits kuti vanofanirwa "kunyatsotarisa" vasati vatora mazororo ekunze; muna Ndira 2021, aimbove Munyori wezvehutano, Matt Hancock, akayambira vanhu kuti varonge "chirimo chikuru cheBritish" uye Munyori wezvekunze panguva iyoyo Dominic Raab akati "zvakange zvanyanya" kuti Brits itore mazororo ezhizha mhiri kwemakungwa. Aimbove Munyori Wezvemamiriro ekunze, George Eustice akadzokorora kuramba "asina chinangwa chekufamba kana kuenda kuzororo kunze kwenyika", ukuwo Mutungamiriri Boris Johnson akataura muna Chivabvu kuti vagadziri vezororo reBritish havafanirwe kuenda kunyika dzine amber kunze kwe "zvakanyanya".
Kunetsa uye mutengo webvunzo dzeCovid, pamwe nekuvhiringika pamusoro peiyo traffic light system - isingaite njodzi yekuchinja kweminiti yekupedzisira iyo yakaona vafambisi vezororo vachimhanyira kumba kuUK kuti vadzivise kuvharirwa - zviri pachena hazvina kuisa avo vakagadzirira zororo rekunze. .
Vashoma vangangove vatora zororo remhiri kwemakungwa vaibva kuNorth East, ne63% yevanhu vemudunhu iri vachiti vanga vasina zororo zvachose, 13% chete vachiti vakatora zororo remhiri kwemakungwa uye 25% vachiti. ndakatora pekugara.
Mukuru weWTM London Exhibition Director Simon Press akati: "Zvabuda zvinozvitaurira - zororo rekunze rezhizha remhiri kwemakungwa rinoonekwa nevazhinji veBritish sechinhu chinodiwa, kwete cheumbozha, uye vashoma vaive vakagadzirira kusiya mazuva manomwe kana gumi nemana muzuva. Mwedzi 14 yapfuura nekuda kwekunetsekana neCovid.
"Zviri kunyangwe uchifanira kutora bvunzo dzinodhura dzeCovid, kuchinja kwemwenje wengozi uye kupesana nemazano akawanda kubva kuvatungamiriri kuti vagare pamba."